LIVE+UPDATE: Chelsea,United,Liverpool,City Iyo Wararkii Ugu Waaweynaa Ee Suuqa Kala iibsiga Saacadihii La Soo Dhaafay – Kooxda.com
Home 2017 July Ingiriiska, Wararka Maanta LIVE+UPDATE: Chelsea,United,Liverpool,City Iyo Wararkii Ugu Waaweynaa Ee Suuqa Kala iibsiga Saacadihii La Soo Dhaafay
LIVE+UPDATE: Chelsea,United,Liverpool,City Iyo Wararkii Ugu Waaweynaa Ee Suuqa Kala iibsiga Saacadihii La Soo Dhaafay
July 17, 2017 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Suuqa kala iibsiga ayaa maraya meeshii ugu xamaasada badanayd xagaaga iyada oo ay kooxaha reer yurub isku baacsanayaan xiddigo waaweyn si ay kooxohooda ugu xoojiyaan.
Hadaba waxa aanu halkan ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga laga qoray ee ku aadan kooxaha reer yurub
Kooxda chelsea ayaa doonaysa saxiixa xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Borussia Dortmund ee Pierre-Emerick Aubameyang kadib markii ay Lukaku u waayeen kooxda Man United.
Borussia Dortmund ayaa doonaysa in ay xiddigan ku iibiso lacag ku dhow 75 milyan oo eur, laakiin waxa ay kooxda chelsea uga digeen in mustaqbalka xiddigan meel loo rido maalinta isniinta.
Xiddigan reer Gabon ayaa sidoo kale kooxdiisa Borussia Dortmund u sheegay in uu doonayo in uu isaga tago kooxda inta lagu guda jiro xagaagan.
Aubameyang ayaan ahayn weeraryahanka kaliya ee Blues lala xiriirinayo waxa ay sidoo kale doonayaan weeraryahanka kooxda Real Madrid Alvaro Morata oo ay Tababare Conte soo wada shaqeeyeen wakhtigii Juvetus.
Andre Belotti ayaa sidoo kala lala xiriirinayaa kooxda uu hogaamiyo tababare Conte, Xiddigan reer Italy yaa 4 gool u dhaliyay 9 kulan oo uu xulka qarankiisa u saftay waxana uu sidoo kale 26 gool u dhaliyay kooxda Torino oo horyaalka Italy ah.
Si kasta ha ahaatee waxa la sheegayaa in uu tababare Conte weeraryahan aan la shaacin u ishaartay weeraryahanka uu ku xoojin doono kooxdiisa xagaagan.
Kooxda Man United ayaa wadahadalo horumar leh kula jirta kooxda Inter Milan iyada oo ku sii dhowaanaysa saxiixa xiddiga khadka dhexe ee xulka qaranka Croatia ee Ivan Perisic.
Inkasta oo ay kooxda Inter Milan diidantahay in ay hoos u dhigto lacagteeda 50 Milyan ee ay doonayso in ay xiddigan ku iibiso hadana waxa la aaminsanyahay in uu xiddigan dhowaan ka soo dagi doono kooxda ku ciyaarta Old Trafford.
Goolhayaha kooxda Man City ee Joe Hart ayaa ogolaaday in uu hal xilli ciyaareed oo amaah ah ugu biiro kooxda West Ham xilli uu Goolhayaha reer England haatan marayo tijaabada caafimaadka kooxda West Ham.
Goolhayaha reer England ayaa doonaya in uu si joogto ah u ciyaari xilli ciyaareedka dambe si uu xulka qaranka England boos uga helo koobka adduunka ee 2018.
Kooxda West Ham ayaa bixin doonta qayb ka mid ah mushaharkiisa iyada oo sidoo kale dookh u haysata in ay si toos ah ula wareegto xagaaga dambe.
Kooxda man city ayaa ku sii dhowanaya saxiixa xiddiga daafaca uga ciyaara kooxda Monaco ee Benjamin Mendy kaas laga reebay safarkii ay kooxda Monaco ugy duushay dalka America.
Sky Sports ayaa fahamsan in ay Man City ka shaqaynayso in ay lacag dhan 50 Milyan kula soo saxiixato xiddigan reer France waxana ay ku sii dhowaanaysaa saxiixa xiddigan.
Kooxda Juventus ayaa ku sii dhowaanaysa saxiixa goolhayaha xulka qaranka Poland iyo kooxda Arsenal ee Wojciech Szczesny isaga oo kooxda ugu soo biiri doona lacag dhan 18 Milyan.
Juventus ayaa goolhayahan u aragta badalka wakhtiga dheer ee goolhaye Gigi Buffon kaas oo uu xilli heshiiskiisa Juventus dhici doono xilli ciyaareedka dambe.
Kooxda Juventus ayaa ku rajo weyn in ay heshiiska Goolhayahan dhamaystiri doonto ka hor inta ayna kooxdu u duulin America oo ay isugu diyaarinayaan xilli ciyaareedka cusub.
Kooxda Liverpool ayaa u duushay Hong Kong shalay laakiin ma joojin dadaalkii ay ku doonayeen xiddiga khadka dhexe ee RB Leipzig Naby Keita.
Maamulka sare ee kooxda RB Leipzig ayaa la sheegayaa in ay haatan diyaar u yihiin in ay kooxda Liverpool ka iibiyaan xiddigan hadii ay miiska saarto lacag ka badan 60 Milyan oo eur.
Liverpool oo dhawaan laga soo diiday dalab dhan 57 Milyan oo euro ayaa la sheegayaa in ay kula laaban doonto dalab dhan 65 Milyan oo euro.